Welcome to Aayaha Nolosha » GABADHA SOOMAALI UGU CAQLI BADAN OO MUDAN IN LAGU DAYDO
GABADHA SOOMAALI UGU CAQLI BADAN OO MUDAN IN LAGU DAYDO
July 8, 2018 - Waxaa Qorey : Caaqil Dalmar -
Iyada oo muddo lagu kari waayay guurka wiil lagu khasabayo ayaa aakhirkii waalidkeed yiri, “Habaar iyo duco mid qaado”, kolkaas bay markii ay halkaasi gaartay yeeshay ducada waalidkeed, jeerkaasina lagu daray wiilkii.
Gabadhu, waxa ay ahayd inan Alle isugu daray qurux iyo qiimo, xilligaas wiilka lagu darayo waxa ay soo dhammaysatay dugsi sare, dhawr bil kadibna waxa u qorshaysneyd in ay Jaamacad ku biirto. Wiilkuse, waxa waxa uu ahaa wiil nolosha ka dhacay, waxbarasho waxa uu uga haray dugsi dhexe, waxa uuna bilaabay balwad, waxa uuna ku faraq xirtay maqaafaadyo iyo mooryaan.
Hooyadi iyo aabbihi oo wiil ay keligiis ka dhaleen ayuu la noolaa, waxa ay dhaleenna isaga keligi ayaa kala joogay oo Afar gabdhood oo la dhalatay ayaa dibadda ku maqan oo reerka soo gacan qabata.
Lacagta biilka ayuu waalidkiisa ku sandulleeyey in laga siiyo wax uu jaad iyo tubaako ku cuno, iyaguna waa ku khasbanaadeen, iyaga oo naftooda uga baqa mararka qaar, maadaama uu kal hore waalid caasiyoobay.
Odayga wiilka dhalay ayaa dhawr jeer ka codsaday in uu guursado, laakiin muxuu keenaa, marqaan iyo qaaddiro ayaa isku beddelaysee, Kolkaas buu gabadhaan oo ay deris ahaayeen u doonay, waxa uuna ugu doonayay bal in uu carruur kala haro, haddii uu isaga dhib mooyee wax dheef ah ku qabin.
Reerka gabadha maadaama ay deris is yaqaana yihiin waa arkaan wiilka gabadha ay ku darayaan in uusan u qalmin, laakiin iyaga oo nolol ahaan hooseeyay ayay ku xisheen dhaqaalaha reerka, maadaama carruurtii oo dhan u dhooftay oo wiilkaas keliya uu joogo, masruuf fiicanna qaataan, nolol waxoogaa sareysana ku jiraan.
Xitaa waxay ku fakareen haddii ay carruur u dhasho wiilkaa armaa mustaqbalkana iyagana la dhoofiyaa, markaasna noloshiinnu is beddeshaa!.
Gabadhu iyadu waxa ay eegeysay mustaqbalkeeda waxbarasho, guurka wiilkaas nolosha ka dhacsan oo kalena weligeed kuma soo dhicin, balse duco waalid ayay ku raacday.
Gabadhii kolkii loo aqal geeyey, runtii aad bay misena uga sii laab-jabtay ruuxaas qurunkiisa, shurufkiisa iyo ustaggiisa, waxa uu ahaa mid balwad iyo nadaafaddarro isugu darmatay, sida uu subixii uga baxo guriga, qado iyo qubays midna ma soo doonto, kolkaas buu sida uu majliska qaadka uga soo tago, isaga oo aan musqusha ku leexan inta qolka soo galo oo isku ag tuuro, xaajaysi bilaabaa, kolkaas baa shiirka ka soo kakamaya dartii ka kala yaacaa dareenkeedii.
Gabadhii mucjisadan heysatay maalmo dhan ayay aad u fekeraysay, oo talo rogrogaysay, dhawr gobdhood bay kala tashatay, waxa ayna badankood kula taliyaan in ay isaga cararto oo deegaanka oo dhan ka tagto, misana taladaasi waa u qalmi weydaa, habaarkii waalidka ayaana horyimaada.
Muddo dheer oo talo keligeed ah ay falanqeynaysay, aakhirkii waxa ay go’aansatay in ay iska deyso niyadjabka, reerkeeda dhaqato, isla markaasina inta kartideeda tijaabiso ayna la timaado tab ay wiilkaan uga dhigto midkii ay ku fekeri lahayd in ay guursato.
Inta taladaasi qaadatay bay marka hore wiilkii ugu dhaqaaqday in ay daraaseyso, waxa ay soo ogaatay in uu jecel yahay: ciyaarta Laadhuuga, sheekooyinka iyo heesaha.
Waxa kale oo ay fahamtay jaadka uu ka xiiseeyo raashinka, kolkaas baa waxa ay go’aan ku gaartay, in ay debin inta u dhigto oo ay madaxa ka qabsato sida ay rabtana uu yeelo markaasi.
Subax uu baxayay ayay inta bariday oo tuugtay bay ka codsatay in maanta duhurkii ay casuumayso oo inta uusan aadin saaxiibadi uu soo maro. “Haye” ayuu ku yiri.
Inta qaadkiisii horay u soo qaatay, saaxiibadina ku yiri, waan idiin imaan ayuu gurigii dib ugu soo laabtay, wuxuu ku indho daraandaray cunto kala duwan oo qolka fadhiga taalay.
Inta uusan u fariisan cunada ayay ku tiri, “Qaali dhidid baa kaa da’ayee, musqusha ayaan biyo kuu geeyay ee bax soo qubeyso”, kadibna musqushii inta galay biyo isku soo daadiyey.
Markii uu soo baxayba, macawis feereysan, shukumaan iyo funaanad ayay u keentay, kadibna qolkii fadhiga soo galay. Cuntadii buu feeraha iska saaray. Markii uu dhammaystay ayey u keentay kibriid(Taraq) uu sigaarka ku daarto iyo haashtariig uu sigaarka isaga demiyo.
Weelashii inta miiska ka gurtay ayay u furtay qaadkii, kadibna u keentay baco uu qashinka qaadka isaga aruuriyo, waxayna soo hor dhigtay Tarmuus shaah qayilaad ku jiro, isla markaasina heeso qaraami ah u daartay. Sidoo kale waxay soo diyaarisay Laadhuu si ay u wada cayaaraan.
Wiilkii inta illoobay nimankii saaxibadiis ahaa ayuu qaadkii meeshiisii ku cunay, oo weliba ka helay sheekooyinka macaan ee ay saaxiibtiisa uga qisaynayso iyo ciyaarta Laadhuuga ay la dhalayso. Dharka khafiifka ah ee macaadinteedu ka muuqato inta ka helay ayuu dhawr jeer ka dul baxaa, indhahana ku xadaa.
Maalintii koowaad, markii uu barwaaqadaas ku dhammaystay, ayay subixii markii la gaaray ku tiri, “Berri ma kuugu celiyaa?”, suu yiri “Haah walaalay”.
Sidii shalay oo kale si ka daran ayay u casuuntay, dhawr beri oo kalena sidaas u samaysay.
Maalintii kale ayay ka aamustay, markaas buu markii uu baxayay, ka codsaday in ay sidii oo kale u samayso, waase ka cudurdaaratay iyada oo eegaysa fal-celintiisa, kolkaas buu inta xabadka saaray oo labada dhaban markii ugu horreysay ka dhunkaday aad u baryey, iyana isaga uun bay tijaabineysaa waa ay ka yeeshay.
Wiilkii waa uu ka go’ay saaxiibadiis, waxa uuna u go’ay xaaskiisa. Odaygii iyo habartii baa la yaabay isbeddelka wiilkooda ku yimid! Inta ay hawshaan ku jirtay ayay misena wadday in ay odayga iyo habartana kalsooni ka abuurato, taasina waa ku guulaysatay, waxa ayna gaartay in masruufka sida loo soo qaado iyada loo dhiibo, kalsoonidoodana waxay gaartay in mararka qaar iyada shirkadda xawaaladda oo ka soo qaadeysay lacagta biilka.
Maadaama wiilka qalbigiisa ay milkisay ayaa markan waxa ay ku fakartay in ay ka yarayso qaadka marduufka ah ee uu qaato iyo labada baakad ee sigaarka ah. Marka uu qaadka la yimaado, sida ay kolna ugu sheekaynayso, jeer Laadhuu ula ciyaarayso, marna ay ula fara ciyaarayso, bay sida uga duufinayso arkaa iyada oo xilligii uu ka kici jiray la joogo, iyo isaga oo saddex mijood oo qaad ah ay u hartay iyo weliba baakad sigaar ah. Inta iska duuduubo ayuu seexdaa. Kolkaas bay maalintii dambe sheegtay in uusan lacag khasaarinin ee in ku filan uu qaadka ka soo qaato. Sidii ay sidaas ugu wadday waxa ay gaarsiisay in uu rubac gaaro iyo baakad barki sigaar ah.
Maalin baa iyada oo ka fekeraysa tallaabada xigta ee ay qaadi lahayd ayaa waxa ay soo maqashay in ay bilaabanayaan tartanka ciyaaraha degmooyinka, waxa inta ay laylinaysay uu uga sheekeeyay in markii uu yaraa uu laacib ahaa, kolkaas bay la jeclaatay in uu ka qeyb galo oo ay ugu beddesho midda Laadhuuga, si ay jaadka uga jarto.
Arrintaas bay inta la socodsiisay bay weydiisay in uu ka qeyb geli karo, markaas buu mar kale u sheegay in uuba laacib hore ahaa isla markaasina yaqaanno maamulaha kooxda degmada u ciyaarta.
Inta faraxday ayaa hadda waa u dhega-nugul yehee, kula talisay in uu ka qeyb galo. Intaas kaga ma harine, inta subixiiba kaxaysay ayay geysay meeshii ay kooxda degmada ay ku tababaranayeen, kolkaas baa ninkii madaxa kooxda ahaa oo waa hore isugu dambeysay inta xabadka is geliyeen, isku burureen, waxa uu ku yiri kooxda ku soo biir oo subax iyo galab walba imow, wuxuuna siiyay dharkii kooxda, isaga oo u sheegay in uu balwadda joojiyo oo aan loo oggolayn wax balwad ah ciyaartoyda.
Markii ay gurigii geysay ba sidii ay u maaweelinaysay galabtii markii la gaaray, inta maaliyaddii u gelisay ayay geysay meeshii, haddana subixii kallihisay. Inta uu tabarbarka qaadanayo kama harto kamana tagto, aad bayna u dhiirrigelisaa, kolka guriga la yimaadana u sheegtaa in uu ugu khatarsanaa ciyaartoyda, sidii ay tabtaas ugu wadday ayay ka jartay qaadkii iyo sigaarkii, waxa uuna ka qeyb galay tartarka ciyaaraha degmooyinka oo uu si weyn uga soo dhex muuqday.
Markii ay ka jartay balwaddii, ayay misena ku bilowday in ay sheekooyinkeedii u beddesho dhinacda horumarka, dhageysigii heesahana ugu beddesho Qur’aanka, kolkaas bay ku hanuunisay in uu salaadda tukado, wuuna ka yeelay dabadeedna masaajidda ayuu si aayar aayar ah ugu xirmay.
Waxa ay kula talisay in uu waxbrashadii dib ugu laabto, kolkaas ku qalqaalisay in uu Dugsi sare bilaabo, kii ay iyadu dhigan jirtay oo maamulka iyo macalimiinta ay si wanaagsan isu yaqaaneen ayay geysay, waana la soo dhaweeyay loona ogolaaday in uu ku biiro.
Dedaalkiisa ayuu sii kordhiyay, wuxuuna u gudbay oo ay ku qalqaalisay kuna biirisay Jaamacad. Intii uu jaamacadda ku jiray ayay kula talisay in uu shaqo raadsado si ay uga xarooban biilka gabadhaha. Sidii uu shaqo u raadinayay, NGO buu shaqo ka helay.
Markii uu jaamacaddii dhammeeyay ayuu misana UNDP shaqo ka helay. Maalintii uu shaqo bilaabay ilaa iyo hadda mushaarkiisa waxa uu ku soo dhacaa iyada koontadeeda, iyada ayaana qoondaysa, isaguna sidaas raali ayuu ku ahaa oo wuu ku qanacsanaa maadaama uu ogyahay inay tahay qofta noloshiisa wax ka badashay.
Wiilkan sidii uu gabadhan u guursaday, weligi dhar iyo catar ma soo iibsan, waxa uu guriga ugu yimaadaa dharka iyo udgiyeyaasha ugu qaalisan ee uu ku soo baxayo. Abidki gar iyo shaarub iyo kuwa cawrada iskama xiirin, oo saaxiibtiis baa u heellan howshaas, taasns jacayl iyo rabitaan saa’id oo dhankeeda ah ayuu ka sii qaaday, ma uu xusuusto inta keligiis musqul galo uu soo qubaysto, iyada ayaana u qabeysa.
Ma bixi jirin iyada oo dharka ay rabto inta u geliso, u saliideyn, u shanlayn, kabaha u baalashayn, oo markaas inta labada dhaban ka shummiso aysan sagootin, oo weliba inta uu ka libdhayo, dhoollacaddayn iyo gacan haatin ku sagoontin.
Marka uu magaalada soo galo, waxa uu noqdaa ninka ugu ooga qurxoon, ugu dhar bilicsan, ugu udug badan, uguna deggan! Kolka uu guriga imaanayo, waa madaxweyne dalkiisii ku soo laabtay.
Hadda gabadhii waxa ay ku nooshay noloshii inta aan la guursan ay fakari jirtay mid ka macaan. Guri weyn oo ay iyadu iibsatay bay deggan tahay, oo ay ka shaqeeyaan laba gabdhood oo shaqaale ah. Gaari raaxo ah oo noocii ugu dambeeyey ahna waa ku socotaa. Lix carruur ah oo qurxoon ayaa u joogta oo dugsiyo qaali ah dhigta. Dhaqaale ay maamusho oo ay sida ay doonto ka yeesho.
Waxa ay la nooshay nin indhiihisa ka jecel oo rabbaayad ah oo ayadu boqorad ay u tahay, far ma uusan dhaqaajin karin in uu iyada la tashado ma ahane, weliba waxa uu aamisanaa in ay noloshiisa oo dhan iyada leedahay.
Gabdhihii ay Iskuulka iyo Jaamacadda isku barteen iyo kuwa ay wada shaqeeyaan oo dhan baa daba ordaya, kolkaas buu mid kasta ku dhahaa, “Abbaayo ninkaan heerkan Naag baa soo gaarsiisaye, iyada iga doono!”, markaas bay gabdhihii oo dhan ka fiigeen, mid walibana mida kale u sheegtaa sidaas ayaana looga quustay oo mrabitaankii xaggiisa ahaa uga wada quusteen, isagana gacalisadiisa kasbatay ayuu u go’ay.
Gabadha sidaas samaysay waa gabar Soomaaliyeed, Sagaal bilood ayay ku dalatay, hooyo iyo aabo ayaa dhalay, gabar kastana waa un sidaas oo waxba ma dheera, balse Caqliga iyo wanaaga Ilaahay uu kuu dhaliyay ayaa la is dheer yahay, marka gabar walboy sidaas samee gurigaagu ha najaxee..
W/Q: Suldaan Nayruus